Kushone owesilisa nowesifazane kanye - abahluke ngakho, futhi zihluke kangaka nomunye. Uma owesifazane, ukushada, okwaqala cishe ngokushesha nje ukucabanga mayelana nokuzalwa komntwana, le ndoda ngokwephula yigxathu ukwenza kanjalo kungase kudinge isikhathi esiningi ukuqonda ukubaluleka yempikiswano ukuzala. Angase abe izinkulungwane izaba ngokudedelana: sisebancane, abazange baphumelele empilweni, kukhona indawo hhayi imali eyanele. Owesifazane usesimweni esinjalo, indlela yokuthola ingane uma umyeni wakhe akafuni izingane?
Okuhlukile nezimpendulo embuzweni ukuthi ukukhulelwa uma umyeni wami akafuni ingane, kungase kube eziningana. The elula - ukwamukela ukwenqena Engxenyeni yesibili futhi ukuqhubeka siphila, ngesisa iphupho ukuthi ngolunye usuku ozithandayo uyavuma. Ungazama lobuphocelelako nokucela ukuthola umyeni wakhe ukuba athathe isinqumo ngalokho kokuzalwa komntwana wakho. Uma le ndlela akusebenzi, kodwa yena unethemba lokuthi indoda iyamthanda ngempela, kuwufanele ukuzama ngokungalugcini kuyena lolu daba imizwa yakhe futhi zisongele aphule ubudlelwane. Lapho isicelo salawo nezinsongo musa asize, kufanele ahambe ayofuna indoda yena ufuna ukuba izingane.
Kodwa yini okufanele uyenze uma owesifazane ungayitholi amandla ukuhamba, futhi ukucabanga ngokugqoka ingane akabashiyi. Kulokhu, ungakwazi ancame ukukhohlisa futhi ikhulelwa futhi kungesemehlweni umyeni wakhe, naye ethemba ukuthi uzothola ukuthi indoda esizayo uzokwazi ukwamukela athande ezingalindelekile futhi engahlelelwe enganeni yakhe.
Ngaphambi kokunquma nenkohliso, namanje ukuzicabangela zalokho okufanele ukwenze ukuze uthole abakhulelwe yayo komunye nomunye ngobuqotho.
Indlela neshaya uwukuhlasela ngokwengqondo. Ungesabi ukuya ezitolo izinsana, izesekeli lezingane ezibhekwa (indlwana, izingubo, amathoyizi, strollers). Ithanda isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka ukuchitha ne imibhangqwana eshadile asebavele izingane. Inzalo siyokhula kowesifazane nezinye izingane, ukuqiniseka xaxa izovela indoda, nokuthi ukuba nomntwana kubalulekile ngempela ngesiwombe sesibili. Mhlawumbe esikhathini esizayo esiseduze uyokhuluma mayelana izinyane.
Esinye isici esibalulekile ingcindezi angase bayisibonelo ingxoxo mayelana ubudala. Kuwufanele uzame ukwenza umyeni wakhe ukuthi iminyaka sowesifazane sifushane, futhi miss isikhathi namuhla, kungenzeka ukuba silahlekelwe yiyo yonke ithuba lokuba abakhulelwe. Ngezinye izikhathi ingxoxo yazo zonke izinzuzo lokuzalwa Ungashintsha isimo yomyeni wakhe.
Ukudlala ngobugebengu noma kanjani ikhulelwa uma umyeni wakhe akafuni ukuba
Futhi zonke izindlela, balingwa, intandokazi abuhlangananga. Lutho uhlala lomunye, kodwa ancame ukukhohlisa. Ngakho, indlela yokuthola ingane ayithole? Kunezindlela eziningana: uyeka ukuthatha izinto zokuvimbela inzalo, khuluma ngezinto Kuvunguza ethunjini, okuyinto alikho ngempela, ibhoboze uhlobo ikhondomu isidoda e isipetu futhi afakwa esithweni sowesifazane, sebenzisa "izinsuku ephephile", njll
Izinketho ukukhwabanisa, indlela yokuthola ingane uma umyeni wakhe akafuni eziningi. Kuphela kukhona umbuzo njengoba amanga zincane kungenziwa kubonakala esikhathini esizayo ku ubuhlobo benu njengomndeni? Ubungeke yini kuba isikhubekiso, futhi uma lungenayo kuhilelani eziningi izinkinga futhi amahlazo, ukusithethelela umyeni can, futhi ngeke iphele uma ukuphila ayemthanda phakade? Nguwena owesifazane!
Ultrasound ngesikhathi sokukhulelwa. Kungani ngidinga it?
Ake sixoxe ukuthi kungenzeka kwabesifazane abakhulelwe ukuya yokubhukuda
Transmission ye Vaz-2109 futhi Tuning yayo
Sugomak Umgede: incazelo kanye nezithombe
Urahusa inkaba - kuyini? Incazelo, Izimpawu kanye Ukwelashwa
Fish ngesiShayina: ukupheka izimfihlo. Fish in sauce sweet and omuncu ngesiShayina